SAI: Dakhliga Saxiixa Xarunta Wax Suuqa Waa inuu Ahaadaa IMM | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulSAI: Dakhliga Saxiixa Xarunta Wax Suuqa Waa inuu Ahaadaa IMM
28 / 01 / 2020 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
sayrtay avm waa inay lahaato dakhliga saxiixa
Suuqa dukaameysiga, oo lagu qoray calaamadaha jihooyinka laga soo raaco saldhigyada metrooga ee magaalada Istanbul, shirkadda iyo deegaanka, shirkadda dowladda hoose ee Metro Inc., ayaa heshay 2010 kun 2017 doolar intii u dhaxeysay 453 iyo 800, iyo 2018 kun 370 TL sanadka 278. Maxakamadda Hanti-dhowrka ayaa ku nuuxnuuxsatay in shirkadda degmadu aysan xaq u lahayn inay ku shaqeyso calaamadaha jihada waxayna xustay in shaqadan iyo dakhligu ay iska leeyihiin IMM.
SözcüSida uu sheegayo wararka Özlem Güvemli; Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay ku wareejisay awooda dhamaan nidaamyada tareenka, tareenka iyo khadadka gawaarida fiilada leh ee loo wareejiyay shirkadda degmada ee Inc. waqtiga iyo qiimaha ay ku qiimeeyeen golaha magaalada ee 2011.
Iyadoo la raacayo go'aanka, aagagga aan soo sheegnay ee la xiriira gaadiidka dadweynaha waxaa maamula shirkadda dowladda hoose ee qiimaha loo qoondeeyay loo wareejiyay IMM.
Si kastaba ha noqotee, hoos imaanshaha xisaabiyaha maxkamada xisaabaadka ee sanadka 2018, in kasta oo calaamadaha jihada ay leeyihiin shirkado kala duwan oo meelaha qaar aysan la xiriirin gaadiidka dadweynaha, Metro A.Ş. waxay ku heshay hawl galkeeda inay ka hor imaanayso qodobbada sharciga.
Warbixinta, waxaa lagu cadeeyay in calaamadaha jihada aysan ku shaqeyn karin shirkadda xiriirka la leh sameynta "xiriir joogto ah iyo faahfaahin", taasi waa, qayb muhiim ka ah gadiidka dadweynaha.
Waxaa la sheegay in Metro Istanbul A.Ş.has ay xaq u leedahay in ay bixiso adeegyo gaadiid wadareed iyo aruurinta daqliga laga helo aagaggan, laakiin calaamadaha jihada waa in ay maamushaa IMM waana in dakhligu ku sii jiraa hay'adda.
453 DHAMMAAN DHAQAALAHA DAKHLIGA
Waxaa la fahamsan yahay in dhaqamada khaladaadka ah lagu fuliyay sanadihii hore gudaha xadka xisaabta 2018.
Taabadalkeed, IMM ma aysan fulin howlihii lagu xaqiijin lahaa xaraashka, laakiin bedelkii kuwa jeclaan lahaa inay helaan adeeggaas la sheegayo, qandaraasyada la saxiixay intii u dhaxeysay 2010 iyo 2017 ayaa loo yaqaan 'Metro A.Ş. Waxaa la go'aamiyay in lagu soo oogo by.
Laga soo bilaabo sanadka 2018, oo ah xilliga xisaabinta, 27 kun 370 TL dakhliga ayaa laga soo saaray 278 astaamo jiho.
ISTICMAALKA TALOOYINKA TILMAAMAHA
Maxkamadda Xisaabaadka ayaa sheegtey in magacyada dukaameysi ama shirkad si toos ah loogu qoro goobahan, iyo marka la eego, astaamuhu maahan calaamad jihada keliya laakiin sidoo kale aag xayeysiinta.
Warbixinta, waxaa lagu cadeeyay in calaamadaha loo dhigay ujeedada toosinta rakaabka kaliya lacag la’aan sababta oo ah nooca adeega gaadiidka dadweynaha iyo calaamadaha ay kujiraan magaca xarunta dukaamaysiga ama shirkaduhu way ku kala duwan yihiin midba midka kale. Dhamaan daqliga soo gala waa iney diiwaangeliyaan Dowlada hoose ee Magaalada ”.
DIIWAAN GALINTA: SAXIIXA SAXIIXA SAXIIXA
Jawaabtiisii ​​maxkamada xisaabaadka, MMI; Wuxuu sheegay in qaar ka mid ah calaamadaha jihada ay leeyihiin tilmaame jihada si fudud looga garan karo rakaabka, iyo magacyada dhismayaasha, suuqyada dukaameysiga ama shirkadaha gaarka loo leeyahay ee leh aqoonsi sare ee gobolka ayaa lagu soo daray.
Haddii magaca shirkadaha gaarka loo leeyahay lagu soo daro taarikada waxaa u sheegay Metro Istanbul iyada oo tixgelinaysa baahida rakaabka iyo haddii ay aqbasho shirkada, waxaa loo sheegay in lacagta lagu soo dallaciyey iyada oo lagu saleynayo saxeex sanadeedka.
Waxaa la ogsoon yahay in badiyaa calaamadaha jihooyinka la bixiyay ay muujinayaan ka bixitaanka saldhigga ku xira ama horteeda suuq dukaameedka. "Adigoo ku dhigaya calaamadaan xaraashka, ku qor magaca hindise-bixiyeyaasha agagaarka iyadoo la raacayo natiijada aysan u dhigmin socodka nolosha caadiga ah iyo ujeeddada calaamadda jihada. Ku wareejinta meheradda calaamadda ee lacagta lagu xareeyay ee adeegga gaadiidka dadweynaha loo wareejiyo IMM waxay ku dambayn doontaa xakameynta laba calaamadood (bilaa lacag ah) isla goobtii ay ku kala wareegeen hay'ado kaladuwan ".
Gebze tareenka xawaaraha sare waa safar ugu yaraan 4
Calaamadaha digitalka iyo habka dhawaaqa rasmiga ah ayaa ka bilaabmay Baasaboorka Waddooyinka (War-Saxaafadeed)
3. Marka hore ku calaamadee buundada
Hereked Signage Fiasco
Coşkunyürek ayaa ku dhejisey dagaalka dhexdiisa
Tilmaamo taraamka aan xitaa laga dhigin hindise!
Calaamadaha jihada metrooga ee Istanbul
Dakhliga Saxiixa Xarunta Suuqa
saldhigyada metro istanbul